About Us - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
Shenzhen Joint Technology Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2006, ka diiwaan gashan summad 'jointech', iyo formallylisted on saddex guddiga cusub ee February 2016, la code stock: 835897.
Shirkadda waxaa diiradda lagu saaray bixinta qaybaha kasbashada in xal maamulka monitoringand hantida mobile, iyo waxaa ka go'an in ay noqdaan maaraynta hantida bixiyeyaasha xal leadingmobile warshadaha iyo wadayaasha. Ka dib markii sano ofdevelopment iyo raasamaal, shirkadda ayaa soo saartay dhamaystiran hardware ofintelligent go'an iyo maaraynta hantida mobile daruur software managementplatform, suuqa la badeecooyinka iyo adeegyada software iyo hardware, taas oo ah heerka sare, wax ku ool ah bixinta, iyo isticmaalka regardenergy iyo maareynta amniga hantida sida asaasiga ah qiimaha.
ganacsiga ugu weyn Thecompany wuxuu ka kooban yahay saddex qaybaha maaraynta hantida fog waaweyn, oo ay ku jiraan: 1. kormeerka iyo maaraynta adeegyada gaadiidka iyo isticmaalka shidaalka online, shirkadaha wadaha gaadhiga kii khuseeyaan isticmaalka shidaalka iyo vehicleposition; 2.Beerta nidaamka oo dhan weelka iyo xamuulka kormeerka iyo maaraynta, macaamiisha, kuwaas oo dareen weyn ku tahay ammaanka xamuulka iyo gaadiidka, 3.remotemonitoring iyo hawlgalka adeegyada network, waayo, tamarta iyo warshadaha powerequipment iyo shirkadda dayactirka.
Taasoo keentay by injineer leh in ka badan 30 sano waayo-aragnimo duurka gacanta auto, our R & D kooxda uu ula socdo technology ugu horumarsan dunida oo dhan, iyo in la horumariyo wax soo saarka badan oo u gaar ah iyo software la shatiyada. R & kooxda D ayaa la si dhow ula shaqeeya la-hawlgalayaasha ee ka mid ah 55 dal iyo gobol, sidoo kale wada shaqeyn la leh qeybaha graduate ka University Shenzhen, etc.Our R & D kooxda wuxuu ka kooban yahay in ka badan 30 injineerada la shahaadada farsamo Senior iyo Midlevel, iyo u qaybsan: Hardware Group, Software Group, Imtixaanka Group, Project Group, iyo kooxda qorshaynta mashruuca; JOINTECH sii gelinaya 8% ~ 15% ka mid ah mugga iibka galay R & D sanad kasta.
JOINTECH ayaa dhiseen hormartay line shirin awoodda 100,000 dareemayaal heerka shidaalka withyearly, mashiinka ugu horeeyay ee si toos ah baaritaanka ee Shiinaha, waayo sax sare shidma heerka shidaalka la 500pcs awoodda imtixaanka maalin kasta.